Shacabka Boosaaso oo Walaac ka qaba dib u dhaca ku yimid Dhismaha Gollaha deegaanka Iyo Mashaariicdii horumarineed. | SAHAN ONLINE
Shacabka Boosaaso oo Walaac ka qaba dib u dhaca ku yimid Dhismaha Gollaha deegaanka Iyo Mashaariicdii horumarineed.
Rayul caamka shacabka Boosaaso ,waxaa hareeyey walaac ku saabsan dib u dhaca ku yimid dhismihii Golaha Deegaanka magaaladda Boosaaso oo qorshihiisu ahaa in lagu dhiso muddo ku 45 cisho gudahood ah sida uu Madaxweynaha Puntland u xadiday markii uu kala dirayey.
Hase yeeshee waqtiga wuxuu marayaa ila iyo hadda 3 bilood marka laga soo bilaabo waqtigii la kala diray oo ahaa 27 May 2015.
Madaxweynaha Puntland ayaa amar ku siiyey Wasaaradda Arrimaha gudaha Puntland inay muddo 45 cisho gudahood kusoo dhisto Gole Deegaan oo cusub,hase yeeshee ma suurta gelin ilaa hadda ,waxaana tan keentay walaaca.
Arrintan waxay saameyn ku yeelatay dhowr waddo oo laga dhisi lahaa magaalada Boosaaso oo la baahiyey qandaraaskoodii oo dib loo hakiyey ka dib markii la kala diray Golihii deegaanka oo dib u dhac ku yimid Golihii cusbaa oon ilaa hadda la xadidin waqtiga la qabanayo.
Waxaa ila iyo hadda muuqata in aaney dhoweyn dhismaha Golaha Deegaanka magaalada Boosaaso ,habaca ka muuqda dhinaca Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo beelaha qaarkood oo aan ku qanacsaneyn xubnaha u qoondeysan.
Xaqiiqduna waxay tahay dib u dhaca kasta oo ku yimaada dhismaha Golaha degaanka wuxuu xambaarsan yahay qorshihii horumarineed oo loogu talagalay sannadka in uu dib u dhaco ama loo wareejiyo degaan kale ama hay’adihii ku deeqay dhaqaalihii ay dib ula noqdaan mar haddii laga faa’ideysan waayey waqtiga ku haboon caqabadaha dowladu abuurtay.